पहिलो पारिश्रमिकले नेपाली शब्दकोश किने - अन्तर्वार्ता - नारी
पहिलो पारिश्रमिकले नेपाली शब्दकोश किने
श्रेया सोताङ, गायिका
एल्बमका लागि म्युजिक भिडियोहरू बनाइरहेकी छु । ३ वटा तयार भए, अर्को एउटा बनाउने क्रममा छु । अहिले एल्बम मात्र निकालेर हुँदैन, म्युजिक भिडियो अत्यावश्यक छ ।
आफ्नो यो नयाँ एल्बममा कस्ता गीत समावेश गर्नुभएको छ ?
पप र प्रेम गीतहरू नै छन् । मेरै स्टाइलका गीतलाई ठाउँ दिएकी छु ।
कुन पुस्तालाई लक्षित गरी गाउनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म यही पुस्ताका लागि भनेर कुनै गीत गाएकी छैन । मेरा गीत स्कुले नानीहरूदेखि पाका व्यक्तिहरू सम्मले रुचाएका छन् ।
गीत गाएको पहिलो कमाइले के किन्नुभयो ?
मैले चार कक्षामा पढ्दा पहिलो जिंगल गाएकी थिएँ । त्यसवाट आएको पारिश्रमिकले नेपाली शब्दकोश किनेकी थिएँ जुन आजसम्म मसँगै सुरक्षित छ ।
त्यसो भए पढाइमा त अब्बल हुनुहुन्थ्यो हैन ?
त्यस्तो पनि होइन, म पढाइमा ठिकै मात्र थिएँ ।
अहिलेसम्म कतिवटा गीत रेकर्ड गराइसक्नुभयो ?
हिसाबै त गरेको छैन तर सय नाघिसके होलान् ।
सानैदेखि अरुणा लामाका गीत गुनगुनाउँथेँ । पछि उहाँका गीत गाएर थुप्रै पुरस्कार समेत पाएँ । दीप श्रेष्ठ, सुकमित गुरुङ, रीमा गुरुङ तथा सिनी गुरुङको स्वरबाट प्रभावित छु । मैले आफ्ना बुबा–आमा (उदय–मनिला) को गायन शैलीबाट प्रभावित भएर गीत गाउन थालेकी हुँ । अहिलेका इन्दिरा जोशी, आस्था राउत तथा आस्था तामाङ मास्केको शैली मन पर्छ ।
गायन वाहेक अन्य के–कस्ता कुरामा रुचि छ ?
नौला ठाउँ घुम्न तथा नयाँ–नयाँ परिकार पकाएर ख्वाउन रुचि छ ।
ढाकाको बजार बढ्दो पुस २४, २०७५
मिस नेपालमा सानै भए पनि छुट्टाछुट्टै प्याजेन्ट भयो भने सफलता हासिल गर्न सहज हुन्छ पुस १६, २०७५
मलेसियामा मैथली फेसन पुस ५, २०७५